Afka Oo qofka Ura Maxaa U sabab ah? (Xog Caafimaad ) - Gaaloos.com ≡Navigasi Menu
→ Afka Oo qofka Ura Maxaa U sabab ah? (Xog Caafimaad )
Afka Oo qofka Ura Maxaa U sabab ah? (Xog Caafimaad )
Urka Afka ama waxa loo yaqaanno Af Quruxnka “Halitosis” waa xaalad qofku ka soo saarayo afkiisa hawo uraysa, taasoo ka duwan af-urka subaxii lala soo tooso, kaasoo ku baab’a nadiifinta ilkaha. Af- qurunka ma laha wax xuduud ah, umana kala soocno dadka da’dooda, noocooda iyo xaaladooda iyo dhaqaalaba, intaa waxaa sii dheer in af-qurunku u keeno qofka niyad jab aad u daran taasoo keenaysa in qofku ka fogaado dadka iyo la hadal-koodaba, xitaa uusan u sheeganin dhibaatadiisa dhakhaatiirta.
Hadaba badanaa niyad jabkaan waxay ka dhalataa in dadka qaba af-qurunka aysan dareemi karin dhibaatada haysata illaa ay ka ogaadaan dad kale. kadibne ay keenayso in ay ka go’aan bulshada kana doorbidaan kalinimada.
Maxaa Keeno Af-Qurunka Ama Af Urka
Waxaa loo kala qaadaa sababaha keeno af-qurunka laba qeybood oo kala ah sida tan,
1: Caafimaad darro ka baxsan ilkaha oo aan la nadiifin ama ay ku dhashaan waxyaaba qurmaya sida wasaqda ama huurada,
2-Infekshan ama caabuq ku dhaca jeebabka sanka iyo afka u dhaxeeyo (Sinusitis) ama qalad ka jira qaab-dhismeedka lafta oo qofku ku dhashay.
*Sanbabada oo qofku ka jiranyahay (Khaas ahaan Cudurrada malax-samayska ee sanbabada “suppurative lung diseases)
*Hawlgabka kilyaha (qashinkii kilyaha jirka ka saari jiray oo hawo ahaan loo soo saaro sida kaadida “urea”)
*Hawlgabka beerka (qashinkii beerka jirka ka saari jiray oo hawo ahaan loo soo saaro)
*Cudurada ku dhaca dhiigga
*Xamiitada oo jirata
* Cillad dheefshiid
*Cunnooyinka qaar Caafimaad darro ka timid ilkaha
*Bolol ilkaha ah
*Ciridka oo jirran
*Infekshan ilkaha ah ama carun
*Kaankarada ilkaha ah
*Af-qaleelka (daawooyinka iyo cudurrada qaar ayaa keeno af-qaleelka)
*Daawooyinka sanka lagu dhibciyo – Xasaasiyada cabburka keento
*Bakteeriyda hawo la’aanta oo ku badato afka ama sanka. 90% oo ka mid ah waxyaabaha keeno af-qurunka waxay ka timaadaa bakteeriyada qurmiska oo afka ku korto, taasoo ka dhalata cudurrada aan kor ku soo xusnay,
Ugu danbeeyntii Haddii uu ku ritay Af urka ama quranka, adiga oo weheshanaaya Qodobada kor ku xusan waxad la xiriirtaa Dhakhtarada daaweeya Ilkaha si aad uga hortagto Xanuunada Afka ka asiibay